Antotanisan’ ny CCAA : misotro isan’andro ny 68%-n’ny mpisotro toaka | NewsMada
Antotanisan’ ny CCAA : misotro isan’andro ny 68%-n’ny mpisotro toaka
Misotro toaka be ny Malagasy raha ny antontanisa navoakan’ny CCAA taorian’ny fanadihadiana ny olona tonga miala toaka ao amin’izy ireo. « Mahalany fatra 12 ny olona iray ao anatin’ny iray andro raha roa ihany ny fatra tsy tokony hihoarana », hoy ny OMS
10 g ny lanjan’ny alikaola miditra ao anatin’ny vatan’ny olona iray misotro labiera 25 cl, whisky 3cl, rhum na divay 10 cl. Sokajin’ny teknisianina ho fatra iray ireo. Araka ny fanambaran’ny Sampandraharahan’ny Firenena mikambana momba ny fahasalamana (OMS), betsaka ny toaka sotroin’ny olona iray rehefa mihoatra ny fatra iray ny laniny. Raha mahalany labiera iray tavoahangy ny olona iray, fatra telo no tafiditra ao anaty vatany. Ny rhum botakely iray tavoahangy misy fatra 11 tokony ho an’ny olona enina, raha hanaja ny fenitra napetraky ny OMS. Ny zava-misy anefa, olona iray, mahalany tapaky ny botakely na iray tavoahangy mihitsy, hoy ny mpitantana ny CCAA, dokotera Andriamarinarivo Miarintsoa. Rehefa nanontaniana ny olona tonga manatona ny Centre de cure Aro Aina eo Andravoahangy ; 49%-n’ny olona, misotro roa ka hatramin’ny enina fatra, 37% mahalany fito ka hatramin’ny 11 fatra, 13% mahavita misotro 12 fatra noho mihoatra ary 1% monja no misotro latsaky ny roa fatra. Matetika eny amin’ny toeram-pisotroana izy ireo satria eny avokoa ny 52% no misotro. 28% eny amin’ny toeram-piasana ary 14% any an-trano. 42%, misotro toaka miaraka amin’ny namana, 32% kosa, misotro irery.
68%-n’ny olona nohadihadiana, misotro isan’andro ; 21% isaky ny faran’ny herinandro (zoma-alahady), ary ny 11% rehefa misy fety na hetsika. 72%, misotro rhum vokarina eto an-toerana, 20% labiera ary 8% toaka hafa. 82%-n’ny olona tonga manatona ny CCAA, efa miankin-doha tanteraka, 18% ambiny, misy tandindon-doza ary efa misy voka-dratsiny eo amin’ny fiainany ny fisotroany toaka. Ambara fa miankin-doha tanteraka amin’ny toaka ny olona iray rehefa mahatspa ny tenany fa misotro betsaka izy, mahazo fanakianana avy amin’ny fianakaviana sy ny manodidina, tsy afaka manao zavatra mihitsy raha tsy misotro aloha (vao maraina) ary manana finiavana te hiala nefa tsy mahatody mihitsy.
Misotro hanadinoana ny olana
Antony voalaza fa mahatonga ny olona iray hisotro toaka ny fanalana ny olana amin’ny fiainana, ny fitarihan’ny namana, fialamboly ny fahatelo ary fahazarana ny farany. Voka-dratsy ateraky ny toaka ny olana ara-pahasalamana eo amin’ny saina mety hitarika amin’ny famonoan-tena, aretin’ny fo sy ny lalandra…
Miteraka korontana eo amin’ny fiainam-pianakaviana sy tokantrano ny fisotroan-toaka ary miteraka herisetra indraindray. Farany, voaroaka amin’ny asany ny olona mpisotro toaka satria tsy mahafehy ny zavatra ampanaovina azy matetika.